विहान उठ्दा सधैं थकित हुन्थिन् श्रीमती, एक दिन क्यामेरामा रेकर्ड भयो सबै कुरा, अनि खुल्यो राज | Rajmarga
एजेन्सी। आमा के हुन्? एक महिला आफ्नो बच्चाकालागि कसरी आफ्नो जिन्दगीसँग सम्झौता गर्छिन्? यस्ता धेरै प्रश्नको जवाफ यो समाचारमा पाइनेछ। आज हामी तपाइँलाई अमेरिकाको लस एन्जलसकी मेलानिया डार्नेलका बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। जो विहान उठ्दा फ्रेश हुनुको साटो थकित हुन्थिन्। श्रीमतीको अवस्था देखेर उनका श्रीमान पनि चिन्तित हुन्थे। वास्तवमा मेलानिया विहान उठ्दा किन सधैं थाकेकी हुन्थिन्? मेलिानियालाई भने आफ्नो थकानका विषयमा सबै कुरा जानकारी थियो।
मेलानियाले भविष्यमा अहिलेको थकान स्मरण गर्न योजना बनाइन्। योजना अनुसार मेलिानियाले आफ्नो कोठाको माथिपट्टि सीसी टिभी क्यामेरा लगाइन्। क्यामरामा रेकर्ड भएको भिडियो मेलानियाले तीन महिला पहिला शेयर गरेकी थिइन्। भिडियोमा मेलानिया आफ्ना बच्चा सुताउने क्रममा आफू भने सुत्न पाउँदिन थिइन्। जसका कारण दिनभर उनी थकित हुन्थिन्। मेलानियाका तीन सन्तान छन्। जसमध्ये एक जना मात्र दश महिनाका छन्। उनको नाम माइलो हो। मेलानियालाई धेरै दुख पनि माइलोले नै गर्छन्। माइला बाहेक मेलानियाको दुई वर्षकी छोरी पनि छन्। जसले कयौं पटक राति आमालाई दुख दिन्छिन्।
Previous post: राजधानीमै आफ्नै पिताले किन गरे पुत्रको हत्या ?
Next post: कोरियाका १० ठूला कम्पनीको बजार मूल्यमा उच्च गिरावट
महिलाहरुमा यौन चाहना भएको कसरी थाहा पाउने ?
तपाईलाई थाहा छ ?सँगै बसेर पनि श्रीमतिसँग यसरी अनजान हुन्छन् पुरुष
महिलाको रोजाई सफाचट छाती, यस्तो रहेछ यसको रहस्य
खाली पेटमा चिया पिउनुहुन्छ ? पढ्नुस् ५ असर